Jeff Goldblum Anoda Kuita Imwe 'Fly' Movie - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Jeff Goldblum Aizoda Kuita Imwe 'Fly' Movie
Jeff Goldblum Aizoda Kuita Imwe 'Fly' Movie
by Michael Carpenter June 17, 2018 1,850 maonero
Wese munhu anofarira kuda Jeff Goldblum, uye nei asiri, iye ngano. Anodiwa ese nekuda kwekugona kwake kugona uye kugona kwake kwakawanda, Goldblum anozvirumbidza gehena rimwe rebasa, kusanganisira mafirimu akasiyana Jurassic Park, Zuva Resununguko, uye Thor: Ragnarok.
Kuvhundutsa vateveri, Goldblum angangogara achirangarirwa zvakanyanya nekutungamira kwake kwaDavid Cronenberg's zvinoshamisa remake ya1986. Nhunzi. Iine zvimwe zvezvakanyanya kukosha zviitiko munhoroondo, Nhunzi inoratidza kuti kudzora dzimwe nguva kutonga.
Mune iyo firimu, Goldblum zvirokwazvo anotamba musayendisiti Seth Brundle, uyo anogadzira seti yetereportation pods inotaridzika kuva budiriro yesainzi. Nehurombo, iye anopedzisira achibatanidza pamwechete yake DNA neine nhunzi yakaipa, zvichitungamira mukutyisa kune vese vanobatanidzwa.
apo nhunzi mhedzisiro mugadziri Chris Walas aigona kutungamira yakaringana kukwana kwakaringana ne1989's The Nhunzi II, Goldblum nguva pfupi yadarika akazivisa panguva yekubvunzurudzwa na Bloody Disgusting kuti angave achinyanya kuda kuoneka mune nyowani nhunzi chikamu.
Nepo Seth Brundle angave asina kupona Nhunzi, Goldblum anoti angave anofara kutamba hama yaimbotaurwa Brundle hama. Tichifunga nezvekuti rakakura sei Goldblum Nhunzi, ndezvechokwadi vateveri vaizobvunza chero zvaitora kuti vadzokere mufranchise.
Zvisinei, pane kubata. Chikonzero chikuru Jeff Goldblum anoda kudzoka mukana wekushanda naCronenberg zvakare, uye anga ave makore kubvira Cronenberg yaita firimu rinotyisa. Zvakadaro, ipfungwa inonakidza kwazvo kufungisisa, uye isu tese tinoshuvira kuti zviitike.